စျေးပေါသော App Wifi UK BS Smart Sockets ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ
အရွယ်အစား- 146x 86 x45 မီလီမီတာ
ပစ္စည်း- PC+ Crystal Glass
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE၊ BS၊ RoHS၊ GCC၊ FC
အလုပ်လုပ်သောဗို့အား: 110 V-250 V
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ- 10% ~ 93%
အလုပ်အပူချိန် -30 ºC ~ + 70ºC
App Wifi UK BS Smart Sockets အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1. လူကြိုက်များသောအရောင်များ ရရှိနိုင်ပါသည်- အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ရွှေရောင်။ အက်ပ် Wifi UK BS Smart Sockets
2. ပရီမီယံအရည်အသွေး Tempered Glass နှင့် PC ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအက်ပ် Wifi UK BS Smart Sockets
3. ဖောက်သည်များထံမပို့ဆောင်မီ switch တစ်ခုစီသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြောင်းသေချာစေရန် ထုတ်လုပ်စဉ်အတွင်း ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း။
4. တင့်တယ်သောအသွင်အပြင်၊ ခေတ်မီအလှဆင်စတိုင်များစွာဖြင့် အလွန်လိုက်ဖက်ပါသည်။ ပုံဆွဲခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ စင်္ကြံ၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ ရုံးစသဖြင့် စသည်တို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အက်ပ် Wifi UK BS Smart Sockets
hot Tags:: အက်ပ် Wifi UK BS Smart Sockets၊ တရုတ်၊ စျေးပေါသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်